Daawo Video:-Imaam Cumar oo ka mid ah odayaasha Dhaqanka Cadaado oo u mahad celiyay Ra'iisuwasaaraha Soomaaliya. -News and information about Somalia
Home Warkii Daawo Video:-Imaam Cumar oo ka mid ah odayaasha Dhaqanka Cadaado oo u...
Daawo Video:-Imaam Cumar oo ka mid ah odayaasha Dhaqanka Cadaado oo u mahad celiyay Ra’iisuwasaaraha Soomaaliya.
Ergada degmada Cadaado uga qaybgalaysa shirka dib-u-heshiisiinta beelaha G/Mudug ee dhawaan furmi doona ayaa gaaray xarunta dowlad goboleedka G/Mudug ee magaalada dhuusamareb.
Wafdigaan oo ka kooban hoggaamiyayaasha bulshada iyo odayaal dhaqameed,waxaa halkaaasi si diirran ugu soo dhoweeyey xubno ka tirsan Guddiga Qabanqaabada Shirka dib-uheshiisiinta, Waxgarad, Ergadii Horay Dhusamareeb u gaartay iyo bulshada Caasimada Galmudug ee Dhusamareb qaybaheeda kala duwan.
Wariyaha warbaahinta warkii.com wuxuu intaasi ku daray in Xubnaha ergada Cadaado ee maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareb la dajiyay halkii loogu talagalay waxayna ka mahadceliyeen sida diirran ee loo soo dhaweeyay iyo sida ay ugu soo diyaargaroobeen ka qaybgalka shirka dib-u-heshiisiinta beelaha G/Mudug..
Magaalada Dhusamareb ayaa waxaa ka socda qaban qaabadii ugu dambaysay ee furitaanka shirka dib- u heshiisiinta waxaana haatan ku sugan dhammaan Ergooyinka.ka qaybgalaya shirka.
Previous articleXOG: Taliye Daahir Indhoqarshe oo lagu sasabayo xil cusul loo magacaabayo
Next articleSanbaloolshe oo laga reebay kulan gaar ah oo Khayre la yeeshay mucaaradka ugu weyn xukuumadiisa
Madaxweynaha Hirshabele oo ka tacsiyeeyay weerar lagu dilay mas’uuliyiin.
Golaha amaanka oo muddo kordhin u sameeyay howlgalka ka dhanka ah...